Beresosɛm Nhoma a Edi Kan 18:1-17
Dawid dii nkonim pii (1-13)
Wɔn a na wɔdeda nnwuma ano wɔ Dawid ahenni mu (14-17)
18 Akyiri yi, Dawid dii Filistifo no so nkonim brɛɛ wɔn ase, na ogyee Gat+ ne ɛho nkurow fii Filistifo no nsam.+ 2 Afei nso, odii Moab so nkonim,+ na Moabfo bɛyɛɛ Dawid nkoa a wotua tow ma no.+ 3 Dawid dii Soba+ hene Hadadeser+ so nkonim wɔ beae a ɛbɛn Hamat.+ Saa bere no, na Hadadeser rekɔtrɛw ne tumi mu akɔ Asubɔnten Eufrate no ho.+ 4 Dawid ko faa ne nteaseɛnam 1,000, n’asraafo 7,000 a wɔtete apɔnkɔ so, ne n’asraafo 20,000 a wɔnam fam.+ Ɛnna Dawid twitwaa nteaseɛnam apɔnkɔ no nyinaa srɛ akyi ntini ma ɛkaa apɔnkɔ no mu 100.+ 5 Bere a Siriafo a wɔwɔ Damasko no bae sɛ wɔrebɛboa Soba hene Hadadeser no, Dawid kunkum Siriafo mmarima 22,000.+ 6 Afei Dawid de asraafodɔm koguu Siriafo a wɔwɔ Damasko no asaase so, na Siriafo bɛyɛɛ Dawid nkoa a wotua tow ma no. Baabiara a Dawid kɔe no, Yehowa ma odii nkonim.*+ 7 Afei nso, Dawid gyee sika kɔkɔɔ akyɛm fii Hadadeser asomfo hɔ, na ɔde baa Yerusalem. 8 Hadadeser nkurow Tibhat ne Kun nso, Dawid faa kɔbere bebree fii hɔ kɔe. Ɛno na Solomon de yɛɛ kɔbere sɛn a wɔfrɛ no Ɛpo+ no, adum no, ne kɔbere nneɛma+ foforo no. 9 Bere a Hamat hene Tou* tee sɛ Dawid adi Soba+ hene Hadadeser+ asraafodɔm no nyinaa so nkonim no, 10 ntɛm ara na ɔsomaa ne ba Hadoram kɔɔ Ɔhene Dawid nkyɛn sɛ onkobisa no sɛnea ne ho te, na ɔmma no amo sɛ ɔne Hadadeser ako adi no so nkonim, na ɔde sika kɔkɔɔ, dwetɛ, ne kɔbere nneɛma nyinaa bi kɔmaa no. (Nea ɛwom ne sɛ, na Hadadeser taa ne Tou di ako). 11 Ɔhene Dawid hyiraa nneɛma yi nyinaa so maa Yehowa.+ Saa ara na dwetɛ ne sika kɔkɔɔ a ogye fii amanaman no nyinaa nkyɛn nso, ohyiraa so. Onya fii Edomfo, Moabfo, Ammonfo,+ Filistifo,+ ne Amalekfo+ hɔ. 12 Seruia+ ba Abisai+ kunkum Edomfo 18,000 wɔ Nkyene Bon no mu.+ 13 Ɔde asraafodɔm koguu Edom, na Edomfo nyinaa bɛyɛɛ Dawid nkoa.+ Baabiara a Dawid kɔe no, Yehowa ma odii nkonim.*+ 14 Dawid kɔɔ so dii Israel nyinaa so hene;+ obuu atɛn na odii asɛntrenee maa ne man nyinaa.+ 15 Ná Seruia ba Yoab na ɔda asraafo no ano,+ na Ahilud ba Yehosafat+ nso ne ɔhene krakye. 16 Ahitab ba Sadok ne Abiatar ba Ahimelek na na wɔyɛ asɔfo, na na Sawsa ne ɔkyerɛwfo. 17 Ná Yehoiada ba Benaia na ɔda Keretifo+ ne Peletifo+ no ano. Ɔhene Dawid nni hɔ nso a, ne mma no na na wɔwɔ tumi.
^ Anaa “gyee no.”
^ Ɔno ara na wɔfrɛ no Toi wɔ 2Sa 8:9, 10 no.